Shandurai Mamwe Mashoko Mune Zvinyorwa
Rongedzazve Runyora Rugwaro Rwakakwana
Rewrite Text in Shona
Nei Iri Rusununguko?
Tinotenda kuti marobhoti anofanira kunge ariwo kunyora mashoko. Runyora rugwaro runobatsira pakutsvakurudza injini (SEO), kugadzira makopi emabhuku kana mapepa, kuverenga zvinyorwa nenzira itsva, uye kuponesa maawa emaawa ekushanda kwevanhu. Kunyorazve mishonga pamakethe ikozvino inodhura mari, uye hatizvitendi kuti inofanirwa. Nokudaro, tinopa mishonga yedu yekunyora zvakare mumitauro inopfuura 100 yakasiyana-siyana kuitira kuti munhu wose ave nekwaniso yekunyora zvinyorwa zvinyorwa.
Chii Chandingashandisa Izvi?
Rewriting basa rechikoro
Rewriting nzira yezvinyorwa
Rewriting peji peji
Rewriting mapeji ebhuku
Rewriting paji peji
Rewriting mumitauro yakawanda
Rewriting nokuda kwekuita pfungwa
Rewriting shoko docs
Rewriting shanduro dzakanyorwa
Rewriting Lab inoshuma
Rewriting mabhuku ekudzidzisa
Ikoko Rugwaro Runyora Runyora Runogona Kuita
Mamwe mazwi pasi apa haafaniri kushandura zvakanaka kubva kuChirungu.
nyora zviri nyore
Kukurudzirwa Kushandiswa uye Mazano
Rimwe Ndima Panguva
Zvakanakisisa kudzokorora ndima imwe panguva imwechete kuitira kuti mhepo ive nani kukwanisa kuongorora zvinorehwa nemashoko acho mumamiriro ayo. Zviduku zviduku zviri nyore kwazvo kuti zviitwe kubvumira kuti idzorere mhinduro yakanaka.
Dzimwe nguva pane mitsara mumitauro iyo isingazivikanwi zvakanaka kuburikidza nekunyora magwaro ekunyora zvakare kana teknolojia yekushandura inoita kuti zvive nyore kuverengazve zvinyorwa. Nokudzivisa mitemo yakasiyana-siyana, michina yekudzorera ichava nani kukwanisa kunyorazve mashoko ako.
Dzivisa Mhembere Yakarembera
Iyo yakareba hurukuro, zvakanyanya kuoma kuti munyorizve adzokorwezve magwaro nokuti ane dambudziko rakaoma kuwana chirevo chemashoko. Zviri nani kushandisa zvishoma zvinyorwa.
Kaviri Chengeta Zvawakagadzirisa
Nyoreji zvinyorwa hazvina kukwana, iva nechokwadi chokuti iwe kaviri chengetedza zvinyorwa zvakare zvakare shure kuti uone kuti rinoratidzika kuoneka. Inowanzodiwa kuchinja shoko kana maviri.
Shandisa zvose mazano uye mazano ari pamusoro apa!
Muenzaniso Wenyaya Rewrite
Kubvira kuma1960 zvakanyanya kufambira mberi zvakaitwa, asi zviri pachena kuti hazvina kuuya kubva pakutsvaga kwevanhu-kutevedzera AI. Pane kudaro, semuenzaniso weApollo spaceships, idzi pfungwa dzakawanzovanzwa mushure mezviitiko, uye zvakave basa remaoko evatsvakurudzi rinotaura nezvehutano husina matambudziko. Kunyange zvazvo zvisingaoneki kuvanhu vose, kutsvakurudza uye hurongwa-kugadzira munzvimbo dzakadai sedhipatimendi chekudzoka, maitiro ezvinyorwa, kutsvaga kwenhema, mazano ekukurudzira, kushandiswa kwevanhu zvakasiyana, kushandiswa kwevanhu mumasangano, kuronga, kuongorora uye kuongorora kweA / B kwave kubudirira kukuru - aya ndiwo hufambiro akatsigira makambani akadai seGoogle, Netflix, Facebook uye Amazon.
Kufambira mberi kwakawanda kwave kuchiitwa kubvira kuma1960, asi zvingave zvisina kuwanikwa nekutsvaga kutevedzera vanhu AI. Pane kudaro, semuenzaniso weApollo spacecraft, pfungwa idzi dzakawanda dzakavanzwa mushure mezviitiko uye dzave dziri basa revanotsvakurudza zvakaratidza nezvehutano husina matambudziko. Pasinei nekusaonekwa kune vanhu vose, kutsvakurudza nekugadzirisa zvisikwa munzvimbo dzakadai sedare rekutsvaga, kuiswa kwemashoko, kushandiswa kweukanganisa, zvirongwa zvekutsvaga, tsvakurudzo yevanhu, kuongorora kwevanhu, urongwa, kuongorora uye A kana B kuedza kwakabudirira zvikuru . Uku kufambira mberi kwaita kuti makambani akaita seGoogle, Netflix, Facebook uye Amazon.
Mimwe Mitauro Inotsigirwa
Nyora Vanyori Rewritten
Tinopa mhizha yedu yekunyora zvakare mumitauro inopfuura 100 yakasiyana. Zvisinei, peji ino pano inogona kunge yakanyorwa nemushanduri. Kana iwe uchida kutibatsira nemagiramuro kana mazano, tapota taura nesu pasi apa.
Taura nesu pa kevind@ota.ai
Isu ikozvino tinopa mharidzo yedu yekuzvinyora zvakare mumitauro inenge inenge zana, uye tine mamirira mazita emamwe mapeji emitauro API. Kana iwe uchida kufungidzirwa kushandisa API, tapota taura nesu isu pasi (kunyanya muchirungu).
Iri peji rakatanga kunyorwa muchirungu uye rakashandurwa. Kana iwe uchigadzirisa, ndapota tumira email apa. kevind@ota.ai